Daawo:- Masuuliyiinta Dekedda Berbera Oo Ka Faahfaahin Ka Bixiyay Khasaaraha Ka Dhashay Dab Ka Kacay Qayb Ka Mida Dekada Berbera | Hangool News
Daawo:- Masuuliyiinta Dekedda Berbera Oo Ka Faahfaahin Ka Bixiyay Khasaaraha Ka Dhashay Dab Ka Kacay Qayb Ka Mida Dekada Berbera
Berbera (Hangoolnews.com)- Hal Koontiinar ayaa ku shufbeelay Dab xalay fiidkii ka kacay dekedda magaaladda Berbera, kaas oo gebi ahaanba ay wada gubatay allaabtii ku jirtay, isla markaana aan waxba laga bad-baadin.
Sida uu xaqiijiyay badhasaabka gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed, oo xalay telefoonka ugu waramay Wargeyska Dawan, isagoo joogay magaaladda Berbera. Waxaannu beeniyay wararka sheegaya in Dekedda Berbera qaybta Koontiinaradda la dhigo Dabku qabsadday.
Jaamac Yuusud Axmed, waxa uu sheegay in aanu jirin wax khasaare ah oo qaybaha kale ee Dekedda ka soo gaadhay Dabkaasi balse Koontiinarkaas oo keliya uu Dabku qabsaday, isla markaana ay boolisku baadhitaan ku samaynayaan sababta keentay Dabkaasi.
“Dekedda qayb ka mid ah ma guban, hal Koontiinar ayuu Dab ka kacay, halkii koontiinar-na waa lagu guulaystay oo waa la bakhtiiyay. Dhamaanba wixii ku jiray koontiinarkaasi wuu gubtay oo wuu bas-beelay. Ma jirro wax khasaare ah oo uu Dabkaasi soo gaadhsiiyay qaybaha kale ee allaabta Dekedda taalay.
Arrintaasi booliska ayaa gacanta ku haya oo baadhaya sababta dhalisay dabkaasi. Dab hadda kacay wixii sababay imika lama ogaan karro, ilaa ay boolisku soo xaqiijiyaan. Maanta (shalay) heer-kulka magaaladda Berbera wuxuu ahaa oo uu gaadhay 45 ilaa 46 degree ayuu ahaa,” ayuu yidhi badhasaabka Saaxil.
Waxa kaloo uu sheegay badhasaabka Saaxil, in aan ilaa hadda la cadayn Karin nooca allaabta ku jirtay Koontiinarkaasi gubtay iyo sidoo kale shirkadda lahayd, maadaama oo ay wakhtigaasi boolisku baadhitaanka gacanta ku hayeen.
Waxaanu yidhi “Allaabta ku jirtay koontiinarka gubtay lama garan karo nooca ay ahayd, oo booliska ayaa ku xidhay Silig meesha uu koontiinarku ku gubtay, ilaa ay hawshoodda dhamaystaana lama geli karro Dekedda, oo xataa shirkadda lahayd koontiinarka gubtay lama ogaan karro.”